တရုတ်နံနံကြီး နှင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ - Hello Sayarwon
Dr. Hlaing Min Ko Ko မှ ရေးသားသည်။ 04/02/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဓါတ်မတည့်မှုရှိမရှိသတိပြုပါ။ birch-celery syndrome နှင့် ဓါတ်မတည့်မှု ကြောင့်သွေးလန့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
Skidmore-Roth, Linda. Mosby’s Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001.